Ny toetran'ny tany sy eropeana any Europe no nanome aingam-panahy ny angano. Ny tany midadasika dia fonenan'ny dia an-tongotra an-tongotra mahavariana izay mitarika amin'ny zava-mahatalanjona sasany eto an-tany. Ireo zohy hita any Hongria, Ranomasina Grand Canyon misy rano turquoise any Frantsa, lapa-lapa any Aotrisy, ary…
Ny fitsangatsanganana sy ny fahitana toerana vaovao dia manome elatry ny nofinay, sahy, ary mianara. Amin'izao tontolo midadasika be izao, Saika tsy ho afaka hahita ny zava-drehetra, ary tsy azo atao ny miaina sy mankafy ny toerana rehetra any Eropa. Miaraka amin'ireo toerana mahaliana maro, you can only…